သူပုန်ကျောင်းသား ရန်ကုန်ရောက်ပြီ။ ~ Htet Aung Kyaw
12:27 PM Htet Aung Kyaw No comments
ABSDF ရဲဘော်ရဲဘက်များနဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များသို့ အသိပေးတင်ပြချက်
ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနဲ့ DVB သတင်းထောက်ဟောင်းဖြစ်ပြီး လောလောဆယ် အလွတ်သတင်း ထောက်၊ စာရေးသူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းနေတဲ့ ကျနော်ထက်အောင်ကျော် (ခေါ်) ၀င်းထိန်ဟာ ၂၈ ရက် စာ ဆိုရှယ်ဗီဇာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆီ ဒီနေ့ (မေလ ၁ ရက်နေ့) ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ကျနော်ရေးသားခဲ့တဲ့ ''သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး'' ဆောင်းပါးတွေကို စု စည်းပြီး (မေလ ၅ ရက်နေ့မှာထုတ်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေ) စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး၊ ABSDF သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်နိုင်တာတွေ လုပ်ဆောင်ရေး၊ ၂၅ နှစ် တာ ခွဲခွာနေရတဲ့ မိဘဆွေမျိုးများနဲ့တွေ့ဆုံရေး၊ လက်ရှိဖြစ် ပေါ် တိုးတက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေနေတွေကို လေ့လာဖို့ရှိပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်အတွင်း တွေ့ရှိရတဲ့ ထူးခြားချက်တွေကိုလဲ ခရီးသွားမှတ်တန်းပုံစံနဲ့ အခန်းဆက် ရေးသားတင် ပြသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။
ရဲဘော်ရဲဘက်များ၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအားလုံးကို လေးစားလျှက်
ထက်အောင်ကျော် (ခ) ၀င်းထိန်
မေလ ၁- ရက်နေ့။ ရန်ကုန်မြို့။
I was arrived Rangoon today, 1 May 2013. During 28 days of my social visa, I plan to publishabook called, ''Marathon journey ofastudent rebel'' about 10-years of my life with the ABSDF.
I also plan to visit my family in Tavoy, southern Burma. And I will also to learn so called ''Burmese Style Reform''.
I will report you weekly about my trip in this blog and some media.
Htet Aung Kyaw @ Win Htein
Posted in: ABSDF,IN ENGLISH,LEARNING MEDIA